दलहरूका आर्थिक एजेन्डा : सपना बाँड्न प्रतिस्पर्धा !
ARCHIVE, OFF THE BEAT » दलहरूका आर्थिक एजेन्डा : सपना बाँड्न प्रतिस्पर्धा !
काठमाडौं – दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसम्म पनि तयार पार्न सकिँदैन । तर महानगर मेयरका एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले दुई वर्षमा मेट्रो र तीन वर्षमा मोनो रेल कुदाउने घोषणा गर्नुभएको छ । हचुवाकै भरमा रेल कुदाउने सपना बाँडेपछि नागरिक र विज्ञले व्यंग्य गरिरहेका छन् । वातावरणविद् भूषण तुलाधरले ट्विटरमा तीन वर्षभित्र विस्तृत योजना पनि तयार नहुने बताउँदै वाहियात सपना नबाँड्न सुझाव दिनुभएको छ ।
नेपालजस्तो पिछडिएको मुलुकका लागि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असम्भव छैन । तर अहिलेकै अवस्थामा त्यति सम्भव पनि देखिँदैन । राजनीतिक दलले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेका छन् । वार्षिक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा झन्डै ६ सय अर्ब स्वदेशी/विदेशी लगानी हुनुपर्छ । भइरहेकै लगानी बिच्किरहेको बेलामा कहाँबाट लगानी आउँछ ? ‘दलहरूले कहाँबाट, कसरी लगानी भित्याउने स्पष्ट खाका नल्याएको हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पत्याउने आधार छैन’, अर्थविद् खनाल भन्नुहुन्छ ।
नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेपछि मुलुकको ५८ प्रतिशत जनसंख्या सहरिया भइसकेको छ । तर सहरका लागि चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, बिजुली, टेलिफोन, सडक, खुला पार्कलगायत न्यूनतम सेवासुविधा सबै नगरपालिकामा छैनन् । यत्तिकै नगरपालिका घोषणा गरेर पाखापखेराका बासिन्दालाई पनि सहरिया बनाइएको छ । दलका घोषणापत्रले सहरी विकास सूचकांक बढाउन ध्यान दिएको देखिएन । दलहरू लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेर मत तान्न केन्द्रित देखिएका छन् । आजको अन्न्पूर्ण पोस्टमा खबर छ ।